Maxay ka yiraahdeen siyaasiyiinta Warqada maanta ka soo baxday Farmaajo? - Jowhar somali news leader
By Mahad	 On Sep 16, 2021
Inta badan Siyaasiyiinta dalka ayaa aragtiyo isku mid ah oo ka soo wadahorjeeda qoraal gelinkii dambe ee maanta ka soo baxday madaxtooyada dalka ka bixiyay.
Waxaa halkan aan idinkugu soo gudbinaynaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka hadashay qoraalka Farmaajo.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur; “Dharka Cusub ee Boqorka “
Warqadda Farmaajo waxey i soo xusuusay sheeko xariirtii caanka ahayd “Dharka Cusub ee Boqorka “ The Empero’s New Clothes” ee qoraaga reer Denmark, Hans C. Andersen uu 1837 qoray. Qisadu waxay ku saabsanayd Boqor labbiska aad u jecel, keliya maahee waxay ugu baxdaa in dadka uu xukumayo, uu isku soo bixiyo kaddibna ku dhex xarrakoodo. Labo nin oo xarfaan, faraha kala xada ah ayaa yimid beledkii boqorka ka talinayey. Waxay sheegteen in ay toli karaan dharka ugu qurxan, kana tolayaan naqshad aan horay loo arag.
Subixii danbe ayaa dadkii la isku soo bixiyey, si uu boqorku ugu xarrakoodo dharka ay dadka caqliga leh oo keliya arki karaan. Cid walba waxay ka cabsatay in caqli la’aan lagu sheego, haddii ay dharka arki weyso, laakiin wiil yar ayaa hal mar la soo booday “ boqorku dhar ma qabo ee waa qaawanyahay” dadkii oo dhan ayaa mar qura codkoodii is qabsaday “ Boqorku waa qaawanyahay” boqorkii wuu cararay oo hoygiisii ayuu dib u galay.
Farmaajo waxaan leenahay wiilasha ku leh dhar aan loo jeedin ayaan kuu xiraynaa,yaysan ku ceebaynin. Rooble waxaan leenahay waa la wada arkaa in ay odaygu marada ka dhacday, oo eryiddii Fahad ayaad dadka ku tustay in uu qaawan yahay ee intaas ugu sin, doorashana ka aad.
THABIT ABDI:Dagashadaba ka Fudud.”
Ninkii geedka tab looga dago garan waayay ee ka soo dhacay, baa laga hayaa “Dagashadaba ka Fudud.”
Villa Somalia oo markii horeba qaaday waddo dhammaadkeedu cirif tahay, ayaa maanta cirifkii iska tuurtay, waana meesha uu damaca dhukan iyo ku tagrifal awood ku idlaado.
Madaxweyne sharciyad ku jooga ayaanan laheyn awood dastuuri ah ee uu ku hakin karo ama xil uga qaadi karo Raisulwasaare, iskaba daayee isaga oo muddo xilleedkiisii dhammaaday.
Qoraalka Villa Somalia waa in RW Rooble laga weeciyo hawlihiisa dastuuriga ah ee dardar gelinta doorashada, sugidda amniga, ilaallinta dhaqaalaha ummadda xilligan kala guurka iyo hor-istaag caddaalad u raadinta #IkraanTahliil iyo qoyskeeda.
Waxaan shacabka Somaaliyeed & dunida saaxiibka la ah Soomaaliya ugu baaqayaa in si buuxda loo garab istaago sharciga, caddaaladda iyo hannaanka doorasho ee RW Rooble hormuudka u yahay.
Cabdi Faarax Juxaa; “Aniga ama waxba”.
Qalinka Farmajo khad sharciyadeed ma laha,
Warkiisuna wuxuu keli ah ka dhigan yahay aan is-dillo.
Xilligan cidda keli ah oo haysata heshiis siyaasadeed oo ay u dhan yihiin Dawlad-goboleedyada iyo mid sharci oo ah xilgaarsiin waa Xukuumadda RW Rooble. RW Rooble ayey xilliga kala guurka ah saaran tahay amaanada iyo kalsoonida Soomaaliduba.
Awood-dhimis RW waa erey cusub oo Farmajo kusoo kordhiyey luuqadda siyaasadda Soomaalida.
Dawlad-goboleedyada, shacabka Soomaalida iyo Beesha Caalamkuba waa inay is-garab taagaan RW Rooble si uu dalka doorasho u gaarsiiyo.
Muungaab:”Warqadda uu soo saaray Farmaajo waa is-miidaamin siyaasadeed, falaad iyo foori diiran
Tallaabada uu maanta qaaday Madaxweynaha muddo xilkeedkiisu dhammaaday ee Maxamed Farmaajo, waa sharci darro, mana jirto meel ay Dastuurka KMG ah uga qoran tahay inuu
Madaxweyne shaqada ka joojin karo Ra’iisal Wasaaraha
Warqadda uu soo saaray Farmaajo waa is-miidaamin siyaasadeed, falaad iyo foori diiran, sii hurin khilaafkii siyaasadda iyo abuurista jawi keena qalalaase amni.
Cali Cabdulaahi Cosoble “Fadeexo caalami ah ayaad dhex fadhidaa ee dib u deg”
Madaxweyne M A Farmaajo waxaan kugula talinayaa inaad ka joogo khaladaadka aad sameyneyso.
Waxaad ku socotaa waddadii Mad Cabdullahi Yusuf (au) ee sababtay iney beesha caalamka soo farageliso arrimaha Soomaaliya, una aqoonsatay inuu caqabad ku yahay geeddi socodka nabadda (spoiler) ayadoo ka dalabtay inuu ka dego xilka (is casilo).
Madaxweyne muddo xileedkaagii waa dhamaaday Ra’iisulwasaaraha ayaa sharciyan leh awoodda hirgelinta doorashooyinka iyo socodsiinta howlaha dowladda. Adiga waxaad tahay musharrax doonaya inuu xilka sii hayo, ma noqon kartid dhexdhexaad waxaana caddeyn u ah sida aad u hortaagan tahay arrinta marxuumad Ikran Tahalil.
Ogow is hortaagga arrinka Ikran Tahalil iyo dagaalka aad kula jirto ra’iisulwasaaraha dalka wexey baabi’ineysaa fursad kasta ee aad dib ugu soo laaban laheyd xukunka.
Fadeexo caalami ah ayaad dhex fadhidaa ee dib u deg inta uusan arrinka Ikran Tahaliil adiga dusha kaa fuulin.